कसले पठायो सुनामी पीडितलार्इ सुनको र्इटा ? :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
कसले पठायो सुनामी पीडितलार्इ सुनको र्इटा ?
सुनामीले तहसनहस भएको जापानको माछा मार्ने बन्दरगाहका मानिसहरूलार्इ आजभोलि सुनको र्इटा उपहार आउने गरेको छ । स्थानीयलाई सुनका इँटा भएको बेनामी पार्सल हुलाकबाट आउने गरेको छ ।
करिब १० दिनअघि मियागी प्रान्तको इशिनोमिकीमा यो सुनको इँटा प्राप्त भएको थियो । सुनामी सहायता समूह र माछा बजारमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई दुई किलोग्राम तौलको सुनका इँटाहरु प्राप्त भएका छन् । जसको बजार मुल्य २ लाख ५० हजार डलर छ ।
एक स्थानीय पत्रिकाले यसलाई ‘सुनको सद्भाव’ भनेको छ । ११ मार्च २०११ मा जापानमा आएको ९ रेस्कट स्केलको भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीका कारण करिब १९ हजारले ज्यान गुमाएका थिए भने फुकुशिमामा रहेको परमाणु संयन्त्र पनि ध्वस्त भएको थियो ।
इशिनोमिकी राजधानी टोकियोको उत्तर पूर्वमा करीब ३ सय ५० किमीको दुरीमा छ । यहाँ तीन हजार व्यक्ति मारिएका थिए र चालिस हजार भन्दा धेरै भवनहरु नष्ट भएका थिए ।
बन्दरगाह र माछा बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीका प्रमुखले आफूलाई दुई किलो सुनको इँटको एउटा पार्सल प्राप्त भएको बताएका छन् ।
पठाउनेको ठेगाना छैन
इशिनोमिकी फिश मार्केट लिमेटेडका प्रमुख क्यूनिओ सूनोले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई भनेका छन् –पार्सल पठाउनेको केही जानकारी छैन । यो पार्सललाई विविध वस्तुका रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैले मैले बडो सावधानीसँग यसलाई खोलें । यसलाई खोलेपछि म चकित भएँ किनभने यसमा दुईवटा २४ क्यारेटका सुनका इँटाहरु थिए, जसलाई कागजमा बेरिएको थियो ।” सुन बाहेक त्यस पार्सलमा अरु कुनै सन्देश र फिर्ती ठेगाना पनि नभएको सूनो बताउँछन् । उनका अनुसार पार्सल उत्तरपश्चिमी शहर नागानोबाट पठाइएको सम्म थाहा भएको छ । सूनोले यो धनलाई माछा बजारको पुननिर्माणमा खर्च गर्ने बताए ।
यसै गरी इशिनोमिकीको पनरुद्धारका लागि काम गरिरहेको संस्था योशी कनिकोलाई पनि दुईवटा सुनका इँटा प्राप्त भएका छन् । उनीहरु भन्छन–“हामी यो दाताको सम्मान गर्छौ यसलाई बर्बाद हुन दिने छैनौं ।”
–बीबीसीको सहयोगमा4Comments on “कसले पठायो सुनामी पीडितलार्इ सुनको र्इटा ?”
With Love From Desert wrote on 17 February, 2013, 10:01
Dhanya chhan Japanese haroo..hamro desh ma vayeko vaye vettaye puch, haata laage chut…
Nepali wrote on 17 February, 2013, 10:43
malai pani aaye hunthyo ni ……….
Like or Dislike: 8 8[जवाफ फर्काउनुहोस्]Ram Reply: February 17th, 2013 at 3:39 pmLoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Like or Dislike:32[जवाफ फर्काउनुहोस्]pure nepali Reply: February 17th, 2013 at 4:42 pmdaka talai ta auna ta paheli aula tara achi
विनिता र गरिमा नयाँ, पूजना र दीपा पुरानै खेलाडी (तस्वीरसहित)